Dowlada Federalka oo u oggolaatay ardayda Puntland in shahaadada Dugsiyada Sare - Home somali news leader
Home NEWS Dowlada Federalka oo u oggolaatay ardayda Puntland in shahaadada Dugsiyada Sare
Dowlada Federalka oo u oggolaatay ardayda Puntland in shahaadada Dugsiyada Sare
Dowlada Federalka ayaa oggolaatay in ardayda soo dhamaysatay dugsiyada sare ee Puntland ay qaatan shahaadada dugsiga sare iyagoo aan gelin imtixaanka ay soo diyaarisay Wasaarada waxbarashada dowlada federalka.
War-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ayaa lagu shaaciyey in hadda heshiis laga gaaray khilaafkii dhanka waxbarashada, gaar ahaan shahaadada dugsiyada sare ee deegaanada Puntland.
War-saxaafadeed ay si wadajir u soo saareen wasaaradaha waxbarashada dowladda federaalka iyo tan Puntland ayaa lagu sheegay in kulan ay yeesheen madaxda labada wasaaradood ay isku afgarteen labo qodob oo kala ah.
1 –In ardayda Puntland ee dhamaysatay dugsiga sare loo fasaxay shahaadadii dugsiga sare ee federaalka oo laga heli doono xarunta wasaaradda waxbarshada Puntland iyo tan federaalka ee Muqdisho.
2 –In la isugu yimaado shirweyne looga arrinsanayo arrimaha waxbarashada dalka, sida xeerka siyaasadda iyo waxbarashada, dhismaha guddiga imtixaanka, manaahijta iyo kormeerka waxbarashada.
3 –Waxay labada wasaaradood isla qaateen in ardayda Puntland loo sii daayo shahaadada dugsiga sare ee heer federaal.
Maamulka Puntland ayaa sanadkii hore diiday in ardaydoodu ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ah ee ay dowladu diyaarisay xilligaa oo uu wasiirka waxbarashada ahaa Cabdulaahi Goodax Barre.
Wasiirkii hore ee Waxbarashada Goodax ayaa diiday in arday aan imtixaanka u fariisan uu helo shahaadada. Hase yeeshee imtixaankii ay dowlada federalka qaaday ayaa waxaa natiijo hoose ay ka heleen kumanaan arday oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaal caasimada dalka ee Muqdisho.
Oggolaanshaha shahaadada dugsiga sare ayaa u muuqata inay timid kadib markii maamulka Puntland uu cadaadis xoog leh ku saaray dowlada federalka inuu fuliyo qorshayaal badan oo ay dowlada ka dooneysay maamulka Puntland.
Previous articleFrench rights groups condemn “arbitrary arrests” in Paris protest
Next articleRa’iisul Wasaare Abiy Ahmed oo booqasho ku tegey magaalada Mekelle